तपाईको फेसबुक अरुले चलाएको त छैन ? यसरि तत्काल थाहा पाउनुस र पासवर्ड चेन्ज गर्नुस ! - Lekhapadhi Technology : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी २ फाल्गुन २०७७, आईतवार २१:०९ मा प्रकाशित
अहिले सबैले फेसबुक प्रयोग गरिरहेका हुन्छन । फेसबुकमै विभिन्न व्यक्तिगत गोप्य कुराकानी, छलफल हुने गरेको साथै अनेक फोटोहरु राखिएको हुन्छ ।
फेसबुक प्रयोग गर्ने धेरै मध्ये कतिपयलाई कसरि फेसबुक चलाउने, कसरि सेटिंग गर्ने भन्ने बिषयहरु थाहा नै हुदैन र अनेक समस्याहरु भोग्नुपरेको हुन्छ ।
तपाईको फेसबुक कुन ठाउँबाट लग इन (login) भएको छ साथै लोकेसन, समय, मिति सबै तपाई आफैले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ ।
यसरि पत्ता लगाउनुहोस:
फेसबुक ओपन गर्नुस, त्यसपछि अकाउन्ट सेटिङमा जानुस् ।
त्यसपछि ‘Security and login’ लेखेको अप्शनमा जानुस्
स्मार्टफोनमा यसरि गर्नुस:
त्यसपछि ‘ Security and login ’ अप्शनमा जानुहोस्
त्यहाँबाट तपाईंको फेसबुक कुन कुन डिभाइसमा खोलिएको छ, कहिले खोलिएको हो भन्ने सबै जानकारी पाउन सकिन्छ । यदि त्यसमध्ये आफूले लगइन गरेभन्दा फरक डिभाइसमा फेसबुक खोलिएको पाइएमा ‘log Out of All Sessions’ गर्न सकिन्छ ।
तपाईले तत्काल आफ्नो पासवर्ड समेत चेन्ज गरि सुरक्षित रहन सक्नुहुन्छ ।